‘बालबालिकालाई माटोसँग खेल्न दिनुपर्छ’ « Janata Samachar
‘बालबालिकालाई माटोसँग खेल्न दिनुपर्छ’
माटोले मेमोरीहरू सिर्जना गर्दछ, माटोले सकारात्मक आउटडोर अनुभवहरू सिर्जना गर्दछ जुन बाहिर खेल खेल्ने र सक्रिय हुने फाइदाहरूलाई प्रबल गर्दछ।
हाईजिन थ्याैरी एस्तो थ्याैरी हो जो आफैमा बिश्वास गर्न गाह्राे हुन्छ। हामी सबैलाई लाग्छ कि बच्चालाई जति सफा र घरभित्र राख्छाैँ त्यति नै स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । तर अहिले भएका अध्ययनले यो सुझाव दिन्छ कि यदि वातावरण ‘धेरै सफा’ छ भने प्रतिरक्षा प्रणाली ठिकसँग परिपक्व हुँदैन र जब बच्चाको प्रतिरक्षा प्रणालीमा कीटाणुहरू (भाइरस, ब्याक्टेरिया, फंगी र परजीवीहरू) वा अन्य वातावरणीय ट्रिगरहरू (परागकण, पशुको छाला, फङ्गल बीजाणुहरू) पछि जीवन प्रतिरक्षा प्रणालीको अभावले धेरै व्यक्तिमा दम, बाथ रोग, जस्तै प्रतिरक्षा सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याहरू विकास गर्दछ । र त्यस्ता मानिसहरु सहजै रोगको सिकार हुन पुग्छन् ।
चिकित्सामा हाईजिन थ्याैरी (स्वच्छता परिकल्पना) बताउँछ कि प्रारम्भिक बाल्यावस्थामा विशेष सूक्ष्मजीवहरू (जस्तै पेटको वनस्पति र हेल्मिन्थ परजीवीहरू) लाई जोखिमले प्रतिरक्षा प्रणालीको विकासमा योगदान पुर्याउँदा एलर्जी रोगदेखि जोगाउँछ। विशेष गरी, जोखिमको कमीले प्रतिरोधक सहिष्णुताको स्थापनामा खराबी निम्त्याउँछ। एक्सपोजरको लागि समय अवधि पाठेघरमा शुरू हुन्छ र स्कूल उमेरमा समाप्त हुन्छ। त्यसैकारण नि बाल्यकालमै उनीहरुलाई प्रकृतिसँग जति नजिक राख्यो त्यति नै उत्तम मानिन्छ।
किन आफ्ना बालबालिकालाई घर बाहिरका खेल खेल्न पठाउने र माटोसँग सम्पर्क हुन दिने ?
आजभोलि हामी बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि यति धेरै चिन्तित छौं कि बाहिर खेल्न जानै दिँदैनौँ वा माटोमा खेलेको देख्यैँ भने पनि गाली गर्दै घरभित्र बस्न बाध्य बनाउँछौँ । यो नै हाम्रो मुर्खता त होईन ? किनकि हामीलाई थाहा छैन कि माटोमा पाइने प्रो बायोटिक्स बालबालिकाको भौतिक र मानसिक विकासका लागि कति महत्त्वपूर्ण छ ?
माटोसँग खेल्दैमा पनि रोग प्रतिरोगात्मक शक्ति बढ्छ। मैले नजिकबाट हेर्दा पनि के पाएको छु भने बाहिर घुम्ने डुल्ने र खेल्ने बच्चा भन्दा जसका बच्चाहरुले धेरै रेखदेख र माया पाएको तथा जो घरभित्रै सबै कुरा दिएर राखेको बच्चा नै बढी रोगी र बच्चैदेखि नै धेरै औषधी खानु पर्ने अवस्था आएको छ । अहिले निकै चिन्ताको विषय के छ भने बालबालिकाहरु घरबाट बिरलै बाहिर निस्किन्छन्। मोबाइलमा गेम खेल्ने मोबाईलमै बच्चाहरु रम्न दिएर ४ भित्ताले घेरेको कोठामा थुनेर राखेको अवस्था छ । जो बालबालिकाको विकासका लागि धेरै हानिकारक र अब आउने बालबालिका धेरै रोगी हुने निश्चित छ।
यो तपाईँले महशुस गर्न सक्ने भन्दा धेरै तरिकामा पनि फाइदाजनक छ र यो दैनिक खेलको सामान्य भाग हुनुपर्दछ। माटोले खेल्ने भूमिकाको लागि लामो समयसम्म बच्चाले माटोसँग पानी मिसाउने मजा फेला पारेको छ। यसको पछाडि केही वास्तविक विज्ञान छ । बच्चालाई माटोमा खेल्न दिँदा धेरै फाइदा हुन्छ ।
हिलोले बच्चालाई प्रकृतिमा जोड्दछ । माटोको साथमा खेल्नु एक फाउन्डेसन गतिविधि हो जुन बच्चाको प्राकृतिक वातावरणको कडा र सहानुभूतिपूर्ण समझदारी विकास गर्न सक्दछ।
माटोले मेमोरीहरू सिर्जना गर्दछ, माटोले सकारात्मक आउटडोर अनुभवहरू सिर्जना गर्दछ जुन बाहिर खेल खेल्ने र सक्रिय हुने फाइदाहरूलाई प्रवल गर्दछ।
माटोले एलर्जी र दमलाई कम गर्दछ आजको समाज पनि सफा छ भन्ने बढ्दो प्रमाणको साथ, माटोमा खेल्नु युवा शरीरमा प्राकृतिक प्रतिरोध बढाउनको लागि सुरक्षित र रमाईलो तरिका हो।
माटोमा खेल्दा रचनात्मकता बढाउँछ । तपाईंलाई लाग्न सक्छ तपाईंको बच्चा माटोमा खेलेर फोहोर भइरहेको छ, तर माटोको खेलको खुला प्रकृति विकासशील मस्तिष्कका लागि धेरै फाइदाजनक छ। जब माटोमा खेलिरहेका बच्चाहरू केवल व्यायाम मात्र गर्दैनन् तर उनीहरूको विचार निर्माण गर्ने, समस्या समाधान गर्ने, आलोचनात्मक रूपमा सोच्ने र आविष्कारशील र नवीन हुने क्षमता विकास गर्ने गर्दछन्। त्यसोभए तपाईंले सोच्नुभयो कि यो केवल माटो मात्र हो ! यसका फाईदाहरु तपाईंको बच्चाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको विकासका लागि स्पष्ट छन् । थोरै हिलोमा नडराऊ। यो तपाईंले कल्पना गर्न भन्दा राम्रो गरिरहेको छ, र तपाईँको बच्चालाई पनि यो मन पर्दछ ।
(लेखक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक हुनुहुन्छ)